Guutuu Addunyaa keessatti Narsoonni 600 ol dhibee vaayirasii koroonaatiin du’uu gabaafame - NuuralHudaa
Guutuu Addunyaa keessatti Narsoonni 600 ol dhibee vaayirasii koroonaatiin du’uu gabaafame
Manni Maree Narsootaa Idila Addunyaa gabaasa Arba’aa kaleessaa baaseen, biyyoota 30 keessatti ogeeyyoonni fayyaa 230,000 tahan Covid-19 qabamuun isaanii akka mirkanaaheefi, ogeeyyota kanneen jidduu Narsoonni 600 sababa vaayirasichaatiin du’uu beeksise.
Manni Marichaa gabaasa isaa kanaan ragaan walitti qabame kan biyyoota 30 qofa akka taheefi, Caamsaa kana keessa lakkoofsi Narsoota Covid-19’n du’anii dachaan dabaluu akka hubates beeksise. Hojii gaggeessaa olaanaan Mana Maree Narsoota Addunyaa Hawaard Katan Rooyitarsiif ibsa kenneen ”Ji’a lama dura lakkoofsi Narsoota Covid-19’n du’anii 100 ture; yeroo ammaa garuu 600 ni caala” jedhe. Mr. Katan itti dabaluudhaanis, ragaa biyyoota 30 irraa argame irraa ka’uun guutuu addunyaa keessatti ammoo ogeeyyonni fayyaa vaayirasii kanaan faalaman 450,000 ol ni gaha jechuun hime.
Ityoophiyaa keessatti ammoo hojjattoonni Fayyaa 65 dhibee vaayirasii koroonaatiin qabamuu ibsame. Ministeerri Fayyaa Dr.Liyaa Taaddasa ibsa kenniteen, Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti ogeeyyonni fayyaa 49 fi ogeeyyonni hojii deeggarsa fayyaa kennan kanneen biroo 16 Covid-19 qabamuu himte. Ogeeyyonni fayyaa vaayirasichaan qabaman harki caalu magaala Finfinnee keessa akka jiran ibsame.
Guyyoota muraasa dura ogeeyyonni fayyaa miidiyaalee hawaasaa irratti hanqina haguuggaa fuulaa (Maski) isaan muudateen walqabatee, ogeeyyoonni fayyaa Vaayirasichaan faalamaa jiraatuu ibsuun, ministeerri fayyaa dhimma kana akka ifoomsu gaafataa turan.
Ministeerri Fayyaa ibsa Kaleessa baaseen, haguugaan fuulaa miiliyoona 130 ta’u ji’oota afur dhufan keessatti ogeeyyii fayyaaf akka barbaachisu beeksise.
September 27, 2021 sa;aa 10:53 pm Update tahe